पैसा नदिने नियतका साथ शुल्क फिर्ता गर्ने महानगरको निर्णय - Aarthiknews
काठमाडौं । अन्तत काठमाडौँ महानगरपालिकाले जागिरको लोभ देखाएर संकलन गरेको रकम साढे ३ वर्षपछि बिना ब्याज फिर्ता गर्ने भएको छ। महानगर पालिकाले २०७३ भदौ २७ गते खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आब्हान गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गर्न आब्हान गरिएको सो बिज्ञापन हेरेर दरखास्त दिएका ३ हजार ३ सय ३ जनालाई परीक्षा शुल्क वापत उनीहरुबाट संकलित रकम फिर्ता गर्ने निर्णय महानगरले गरेको हो।
बिभिन्न ९ पदको लागि खोलिएको ७० जनाको दरवन्दीका लागि आवेदन फारम भराएपनि परिक्षा नगराएको हुनाले निजहरुलाई पैसा फिर्ता गर्ने निर्णयमा महानगर पुगेको हो । महानगरपालिकामा २०७६ पुस १५ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता र्इश्वरमान डंगोलले बताए । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपानेले महानगरले २०७३ भदौ २७ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना नम्बर ६र०७३र७४ को विज्ञापन र सुचना नम्बर ७र०७३र०७४ को विज्ञापनहरू रद्ध गरी आवेदकहरूको परिक्षा दस्तुर फिर्ता दिने निर्णय कार्यन्वयन गर्न त्यहाँको प्रशासन विभागलाई निर्देशन दिएका छन्
महानगरले गरेको अधिकृतस्तरको छैंठौं तहको विज्ञापन स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो। सोमाथि सुनुवाही गर्दै सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम कानुन संशोधन गरी माग सम्बोधन गर्ने अधिकार पदपूर्ति समितिलाई नभएकोले सो सम्बन्धमा जे गर्नुपर्ने हो महानगरलाई नै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोहि निर्देशनको आधारमा पछिल्लो निर्णयमा महानगर पुगेको देखिन्छ।
महानगरले अधिकृत तहमा दरखास्त दिने हरेक व्यक्तिबाट फारम शुल्क १००, प्रत्येक समाबेशी समुहको लागि २०० रूपैयाँ र परिक्षा शुल्क १००० रूपैँया उठाएको थियो । ति ७० वटा दरबन्दीका लागि जम्मा ३ हजार ३ सय ३ जनाले आवेदन फारम भरेका थिए । यसरी सो विज्ञापनका आधारमा परिक्षा फारम भर्ने परिक्षार्थीबाट महानगरले ३३ लाख ३० हजार रूपैयाँ उठाएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासन विभागका विभागीय प्रमुख नवराज ढकालले आर्थिक न्युजलाई जानकारी दिए ।
महानगरले गरेको विज्ञापनमा प्रशासन तर्फ छैटौं तहको शाखा अधिकृत र सहायक प्रशासनमा महिला ८ जना, आदिबासी ७ जना, जनजाति, मधेसी ६ जना, दलित २ जना, अपाङ २ जना, पिछडिएको क्षेत्रमा १ जना र खुल्लामा ३० जना गरी ५६ जना कर्मचारी माग गरेको थियो । जसमा २ हजार ६ सय ६७ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।
सोही वर्ष फाल्गुन ९ गते प्रथम पत्र, १० गते द्धितीय पत्र र ११ गते तृतिय परिक्षा समेत भएको थियो । अधिकृत स्तर छैठौं तहमा लेखा अधिकृत र लेखाको लागि आदिवाशी जनजातिमा १ जना माग गरिएको थियो । यो पदको लागि ९ जनाले दरखास्त दिएका थिए । यसको प्रथम, द्धितीय र तृतीय पत्रको लागि क्रमशः फाल्गुन १२,१३ र १४ गते परिक्षा थियो ।
विज्ञापन नम्बर २८/०७३/०७४ मा राजस्व अधिकृतको लागि ३ जना कर्मचारी माग गरिएको थियो । उक्त्त पदको लागि आदिवासी जनजातीमा १ जना र खुल्लामा २ जना गरी ३ जनाको दरबन्दी थियो । यसको परिक्षा मिति फाल्गुन १५, १६ र १७ गते तोकिएको थियो ।
२९र०७३र०७४ विज्ञापन नम्बरमा ४ जना सिभिल इन्जिनियर माग गरिएको थियो । सो पदमा महिला १ जना, आदिवासी जनजाति १ र खुल्लामा २ जना गरी ४ जना कर्मचारीले महानगरको जागिर खान पाउँथे । उक्त पदको लागि ३९१ जनाले दरखास्त दिएका थिए । उनीहरुको परीक्षा फाल्गुन ११ र १२ गते गर्ने कार्यक्रम थियो ।
विज्ञापन नम्बर ३०र०७३र०७४ मा अर्किटेक्ट इन्जिनियर खुल्लामा १ जना कर्मचारी माग गरिएकोमा ७३ जनाले दरखास्त दिएका थिए । यसको प्रथम परिक्षा १३ र १४ गतेको लागि तोकिएको थियो । त्यसैगरी ३१र०७३र०७४ विज्ञापन नम्बरमा कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा खुल्ला तर्फ १ जना कर्मचारी माग गरिएकोमा २६ जनाले दरखास्त दिएका थिए । यसको परिक्षा फाल्गुन १५ र १६ गते रहेको थियो ।
सोही मितिमा ३२र०७३र०७४ विज्ञापन नम्बरमा कम्प्युटर प्रोगामर अधिकृत स्तर छैंठौ तह सूचना अधिकारीको लागि महिला १ जना र खुल्लामा १ जना गरी २ जना कर्मचारी माग गरिएको थियो । यसमा ३३ जना परिक्षार्थीले दरखास्त दिएका थिए ।
अर्को ३३र०७३र०७४ विज्ञापन नम्बरमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, अधिकृत स्तर छैठौं तहको लागि १ जना कर्मचारी माग गरिएकोमध्ये ४९ जनाले दरखास्त हालेका थिए । यसको परिक्षा फाल्गुन १९ र २० गते हुने गरी तोकिएको थियो ।
विज्ञापन नम्बर ३४ मा कम्प्युटर अधिकृत पदको लागि खुल्लामा १ जना कर्मचारी माग गरिएको थियो । यो पदको लागि भने कसैले पनि दरखास्त नदिएको महानगरपालिकाको तथ्याङले देखाएको छ ।
महानगरले माग गरेको पदको लागि दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म २१ वर्ष पुराभई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र प्राविधिकको हकमा ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने थियो । यसको दरखास्त लिने अन्तिम २०७३ असोज २६ गतेसम्म तोकिएको थियो ।
महानगरपालिकाले पैसा फिर्ता गर्दिन त भनेको छैन तर गर्ने छाँट पनि देखिंदैन । यसबारे जिज्ञासा राख्दा परिक्षार्थीले भरेको परिक्षाको दस्तुरको लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना आब्हान गर्ने जानकारी महानगरले जानकारी दिएको छ । ढकालका अनुसार महानगरले निकालेको सूचनाको आधारमा परिक्षार्थीले रसिद र परिक्षा(पत्र सहित निवेदन दिएमा उक्त रकम फिर्ता हुनेछ ।
यी कर्मचारीको कुरा सुन्दा ति पींडित आवेदनकर्ताले पैसा फिर्ता लिने सम्भावना कम छ। यतिका वर्षसम्म पक्कैपनी आवेदनकर्तासँग रसिद र परिक्षा(पत्र सुरक्षित छैन भन्ने अनुमानका आधारमा ति कागजात माग गरिएको पींडितहरुको आरोप छ। सो विज्ञापनका आधारमा फारम भर्ने एक आवेदकले भने, मैले कसरि लिने पैसा फिर्ता ? फारम भरेको थिएँ। डेराको बसाई तीनपल्ट त कोठा नै सरि सकियो। ति चिर्कटा कता पुगे कता। मसँग नागरिकता शैक्षिक प्रमाणपत्र छन् ति देखाउँदा पाउनु पर्ने हो नि, होइन ? उनको प्रतिप्रश्न थियो।